प्रकाशित: मंगलबार, वैशाख २१, २०७८, ०६:१४:०० लक्ष्मी विश्वकर्मा
काठमाडौं - काठमाडौं पाटन अस्पतालमा नियमित चेकजाँच गर्न आएकी अञ्जना बुढाथोकी गर्भवती छन्। रामेछाप घर भई हाल बागडोलमा बस्दै आएकी उनी साढे १ घण्टा हिँडेर अस्पताल पुग्छिन्।
उनीसँग घरमा कुनै सवारी साधन छैन। एम्बुलेन्समा जाने पैसा पनि छैन। ट्याक्सी पनि महंगो हुन्छ। उनका श्रीमान काठमाडौंमा ड्राइभिङ पेसा गर्थे तर निषेध आदेशले गाडी चलेका छैनन्।
‘चेकजाँच गर्न नआउँ भने ज्यानको चिन्ता, अस्पतालमा आउँदा पनि कोरोनाको जोखिम छ,’ अञ्जना दुखेसो पोखिन्।उनलाई ‘२७ गतेको’ चिन्ताले झन् सताएको छ। त्यो दिन उनलाई डाक्टरले दिएको ‘डेलिभरी’ मिति हो।
निषेध आदेश वा लकडाउनले गरिब/दुःखी परिवारका गर्भवती महिलालाई धेरै समस्या हुने उनको अनुभव छ। त्यसैले उनलाई भित्रभित्रै डर लागिरहेको छ।
बिना नगरकोटीले चोभारदेखि नियमित चेकजाँचका लागि थापाथलीस्थित प्रसूति गृह आउँदा अञ्जनाको जस्तै समस्या भोग्नुपर्‍यो।
उनी बिहान साढे ७ बजे नै अस्पताल आउन घरबाट निस्किन्। निषेध आदेशले गर्दा सवारी साधन नभेटेपछि बल्लबल्ल छिमेकीसँग सहयोग मागेर प्रसूति गृह थापाथली आइपुगिन्। ‘यस्तो अवस्थामा एकदमै गाह्रोे हुने रहेछ। यसरी आउँदा पनि ज्यानै जाखिम हुने सम्भावना पो रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘खोई यो अवस्था नआइदिए पनि हुने। यस्तो वेला त सरकारले पनि केही नगर्ने रहेछ।’
अस्पतालमा पनि डाक्टर तथा नर्सले पहिलाको जस्तो हेरचाह नगरेको उनको गुनासो छ। कोरोनाको पनि उत्तिकै जोखिम रहेको उनले बताइन्।
यी त कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गत बिहीबारदेखि निषेध आदेश जारी गरेपछिका केही उदाहरण मात्र हुन्। कोरोनाको त्रास अझैं हटेको छैन, बरु झन बढ्दै गएको छ। त्यसमा पनि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्यबारे सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा सबैभन्दा बढी जोखिम बढेको छ।
गर्भवती र सुत्केरी समय महिलाको विशेष संवेदनशील अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई विशेष हेरचाहको आवश्यकता पर्दछ। अहिले कोरोनाको बेला किशोर अवस्थाका युवती, गर्भवती र सुत्केरी महिला बढी असुरक्षित देखिएका छन्।
काठमाडौंको प्रसूति गृहमा लकडाउन अगाडिको जस्तो भिडभाड त छैन। तर अस्पतालमा नियमित चेकजाँच गर्न आउनका लागि यातयातको सुविधा नहुँदा धेरै भर्गवती महिला जोखिममा परेका छन्।
कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमित हुनेमा गर्भवती महिलाको संख्या पनि अधिक छ। अरु महिलाभन्दा गर्भवती महिलाहरुमा झन बढी जोखिममा हुने परिवार महाशाखा मातृ तथा नवशिशु शाखाकी प्रमुख पुन्य पौडेलले बताइन्। देशभरमा कति गर्भवती महिला छन् त्यसको पनि तथ्यांक संकलन गर्न थालिएको पौडलले जानकारी दिइन्।
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण पहिलो मृत्यु सुत्केरीको भयो। सिन्धुपाल्चोककी सुत्केरीको मृत्यु भएपछि गरिएको परीक्षणमा कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ भेटिएको थियो।
पहिलो लहरको कोरोनाले देशभरमा ७ गर्भवती महिलाको मुत्यु भएको थियो। दोस्रो लहरको कोरोनामा पनि केही गर्भवती महिलाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
परोपकार प्रसूति गृह तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीकी निर्देशक डा. संगीता मिश्र नियमित चेकजाँच गर्न आउने भर्गवतीमा कुनै पनि कमी नआएको बताउँछिन्।
अस्पतालमा नियमित चेकजाच गराउन आउने बिरामीलाई समस्या परेको छ भने फोनबाटै सल्लाह सुझाब दिने गरेको र घरमै उपचार सम्भव नभएर अस्पताल आउनै पर्ने भए मात्र अस्पताल आउन सुझाव दिने गरेको उनी बताउँछिन्।
पाटन अस्पतालका निर्देशक प्रा.डा. रवि शाक्यका अनुसार दोस्रो लहरको कोरोनामा गर्भवती महिलाको संख्या बढेको छ। अरु अस्पतालमा डेलिभरी गर्न आउँदा कोरोना पोजिटिभ भए पाटनमा पठाउने गरेको उनले बताए।
कोरोनाका कारण गरिएको निषेध आदेशका कारण समयमा अस्पतालमा पुग्न नपाएर सुत्केरी र गर्भवती महिलाको मृत्यु हुनुले उनीहरुमा थप त्रास थपिएको छ। कतिपय गर्भवती मानसिक रुपमा झनै कमजोर भएका छन्।
कुर्सीमात्रै देख्ने सरकारले भोकै सडकमा लर्बराइरहेका मजदुर देखेन